Kenyanka oo loogu baaqay in ay laamaha amanka ku soo wargaliyaan dadka sharci darada dalka ku jooga – The Voice of Northeastern Kenya
Kenyanka oo loogu baaqay in ay laamaha amanka ku soo wargaliyaan dadka sharci darada dalka ku jooga
Shacabka Kenyanka ah ayaa loogu baaqay in ay laamaha amaanka ku soo wargaliyaan dadka sida sharci darada ah dalka ku joogo islamarkaana aan haysanin ogolansho ay dalka ku joogan.
Mid kamid ah saraakisha gudiga qaran ee u xilsaaran sidii Kenyanka loo ogeyn siin lahaa oo ay ooga qeyb qaadan lahaayen arimaha amaanka Rama Ndegwa Mwangombe ayaa sheegay sida lagama marman ay u tahay in shacabka ay soo sheegen cid walbo uu dalka ku cusub noocu ahaadaba.
Dhanka kale mas’ulkan oo la hadlayay radiyaha ku hadasha afka dowlada waxaa uu intaa kudaray in aan laga cabsanin soo wargalinta laamaha amaanka waxyaabaha laga shakiyo xitaa hadii ay yihiin warar been abuur ah balse uu qofka maqlay.
Tani ayaa ku soo aadeysaa xilli goor sii horeysay ay eheyd markii Ciidamada booliska ee ka howl gala magaalada tan Nairobi ay xabsiga u taxaabeen 35 qof oo u dhalatay dalka Ethiopia, kuwaasoo lagu tuhunsanyahay in ay si sharci darro ah ku joogeen dalka.
Dadkaan ayaa lagu soo qab qabtay howlgal ka dhan ahaa kala gudbinta bani’aadanka oo ka dhacay xaafadda Ruai iyo deegaanno kale oo ku yaalla naqaaxiga magaalada Nairobi.
Inta badan dadkaan sharci darrada ku joogay wadanka ayaa lagu qabtay guri ku yaalla xaafadda Ruai, halkaasoo lagu qarinayay si looga sii gudbiyo.
Dadka laga soo safriyo dalka Ethiopia oo marin ahaan loo keeno Kenya ayaa inta badan looga sii gudbiyaa dalal kale oo ay qaab tahriib ah ku tagaan, waxaana meelaha la geeyo ugu badan wadanka Koonfur Africa.
Horay ayey booliska Nairobi gacanta ugu dhigeen dad fara badan oo ka soo jeeda dhinaca dalka Ethiopia, kuwaasoo qaab dhuumaaleysi ah ugu sugnaa Kenya.
← Ciidamada ilaalada xeebaha Libya oo weeraray doon ay tahriibayaal saarnaayeen
Dowlada Syria oo lagu eedeyay in ay isticmaashay sun halis ah →